Ajụjụ - Dongguan JinRong Aliminum Products Co., Ltd
Ị a factory ma ọ bụ a trading ụlọ ọrụ? Na-agwa m ọrụ gị?
Anyị bụ ndị a factory nke a pụrụ iche na aluminum nhazi n'ichepụta ihe karịrị afọ 10, dị ka ulo oru na-abụghị ọkọlọtọ ihe onwunwe, aluminum zọ akụkụ, aluminum ọxịdashọn, okpomọkụ sink, aluminum ịghasa wdg
Gịnị bụ gị uru na iji usoro? Bụ n'ebe ọ bụla MOQ chọrọ?
Anyị na-enye OEM ọrụ n'ihi na aluminum nhazi na factory price na kacha mma mma. The iji usoro bụ na ị na-eziga ịbịaru anyị, anyị ga-analysis gị ịbịaru na quote ka gị dabeere na MOQ ị chọrọ. (No MOQ chọrọ, ma price maka obere ibu ga-adị elu karịa nnukwu ibu)
Olee otú akwụkwọ ikike nke ngwaahịa àgwà akara?
Anyị jide ikesiike quality ịchịkwa si malite na njedebe na nzube na 100% njehie free. I nwere ike na-achọ n'ihi na mgbe-ire ahịa ọrụ ma ọ bụrụ na e nwere nsogbu ọ bụla. Ọ bụla iwu ga-gabiga anyị QC ngalaba tupu mbupu.
Ị na-enye samples? Ọ free ma ọ bụ mmezi?
Ee, anyị nwere ike na-enye ndị sample maka free ụgwọ ma adịghị akwụ ụgwọ na-eri nke ibu, na nzube nke na-ezipụ samples gị maka ịlele anyị ngwaahịa àgwà na technology usoro.
Olee otú nwere ike ịbụ na usoro ma ọ bụrụ na m chọrọ ime ka prototype?
Ọ bụrụ na ị nwere nghọta ma ọ bụ n'omume, biko chere free izipu anyị, na-agwa anyị gị pụrụ iche chọrọ ndị dị otú ahụ dị ka ihe onwunwe, ndidi, n'elu agwọ ọrịa na ego gị mkpa.
Olee otú ị na ụgbọ mmiri na ngwaahịa? Olee otú ogologo bụ gị nnyefe oge?
Ma ihe ndị sample Ndinam, n'ozuzu ya bụ banyere 5 ~ 10 ụbọchị, ma ọ bụ dị ka ukwu na ngwaahịa complicated.We ike ụgbọ mmiri ha site DHL, EMS wdg Ma ihe ndị nnukwu iji na-emepụta na ngwaahịa, anyị ga-ụgbọ mmiri ha site FOB , nnyefe oge dabeere na mba ga-amasị gị ka ụgbọ mmiri, ma kpọmkwem ụbọchị banyere ụbọchị 25.
Olee ebe a na gị factory odude? Olee otú m nwere ike ịga na ya?
Anyị ụlọ ọrụ dị na Jiji Industrial mpaghara, Shanghe Village, Wangniudun Town, Dongguan City, nke bụ ezigbo obodo si Shenzhen, Guangzhou, Hongkong.